Mitambo nemitambo muIjipita yekare | Absolut Kufamba
Mitambo nemitambo muIjipita yekare
Isabel | | Ijipiti
Mutsika dzekare dzeMediterranean, tsika yemitambo yaive yakabatana zvakanyanya nekupemberera kwechitendero uye zororo. Nekudaro, iyo pfungwa yemitambo muIjipita yekare yakasiyana zvakanyanya nezvazviri ikozvino.
Muchokwadi, vamwe vaongorori vanoramba kuti vaidzidzira kurovedza muviri kwete zvemitambo zvakadaro nekuti vaive vasina kana izwi rekureva chiitiko ichi. Saka mutambo wainge wakaita sei muIjipita yekare?
1 Ndeupi mutambo muEgypt yekare?
2 Ndiani akatamba mitambo muIjipita yekare?
3 Vakadzi vaitamba mitambo here?
4 Mutambo waionekwa sechishamiso muEgypt yekare?
5 Chii chaive mutambo waFarao?
6 Paive paine pharao aimira kunze semumhanyi?
7 Rutivii rwakaitwa nerwizi naNile pamitambo muEjipitori?
8 Paive nemwari here ane chekuita nemitambo mungano dzevaEgipita?
Ndeupi mutambo muEgypt yekare?
Mamiriro ekunze emunyika anga akakodzera kushandisa nguva zhinji yezuva panze uye zvaifadza tsika yekurovedza muviri, asi usina pfungwa yekuva mutambo sezvazviri kuitirwa parizvino. Nekudaro, ivo vaiziva zvakakwana hukama pakati pechiitwa chemuviri uye yakanaka mhasuru toni.
Chaizvoizvo, mutambo muEjipitori yekare yaive nemitambo yekunze uye kurwa kwemauto uye kudzidziswa kwekurwa. Mune dzimwe nzvimbo dzekuchera matongo makuva ane mifananidzo inomiririra hunyanzvi hwakafanana nekarati uye judo zvakawanikwa. Mufananidzo unomiririrwa wakawanikwawo muguva reJeruef panowanikwa vanhu vanoverengeka vachirwira sekunge mutambo wetsiva.
Mumwe mutambo muIjipita yekare waiwanzoitwa mitambo. Yakanga iri pamusoro pemadzinza madiki kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe kuona kuti ndiani aimhanya. Kuva panze kwenguva yakareba, kumhanya kana kushambira zvaive zviitiko zvakajairika kwavari.
Chimwe chiitiko chemitambo chechinyakare chinoitwa nevaIjipita ndiko kuvhima mvuu, shumba kana nzou. Kune nyaya dzinoti Farao Amenhotep III akauya kuzovhima nzombe makumi mapfumbamwe nezuva rimwechete uye kuti Amenhotep II akakwanisa kuboora nhoo yemhangura nekupfura miseve mishanu neuta hwakafanana. Nezve vanhu, ivo vakavhimawo asi waive mutambo mudiki senge kuvhima dhadha murwizi.
VaIjipita vakarongawo mijaho yengoro pamwe nemakwikwi ekupfura nemiseve, uyo waive mutambo wepamusoro panguva iyoyo.
Ndiani akatamba mitambo muIjipita yekare?
Zviuru zvemakore apfuura, tarisiro yehupenyu yanga isiri yakareba uye muEgypt haina kudarika makore makumi mana. Ndosaka vanhu vaidzidzira mitambo vaive vadiki uye vaiwanzoita zvekurovedza muviri.
Vakadzi vaitamba mitambo here?
Kunyangwe iwe uchigona kufunga neimwe nzira, vakadzi vekare vechiIjipita vaitamba mitambo asi ivo vanga vasiri zviitiko zvine chekuita nemujaho, simba kana mvura asi kune anocheka, kupesana nekutamba. Ndokunge, vakadzi vakaita chinzvimbo chakakosha mumabiko epachivande uye mhemberero dzechitendero sevatambi nemachechi. Nhasi tinogona kutaura kuti vakadzi ava vakaita chimwe chinhu chakafanana nejimnijiki.
Mutambo waionekwa sechishamiso muEgypt yekare?
Kusiyana nevamwe vanhu vakaita seRoma kana chiGiriki, muEgypt mutambo hauna kufungidzirwa sechiitiko. Kuburikidza nemifananidzo nezvimiririra zvakawanikwa mukuchera matongo, zvave zvisingaite kuwana mareferenzi kunzvimbo huru kana zviitiko zvine chekuita nemitambo mikuru yemitambo.
Izvi zvinoreva kuti muEgypt yekare maive musina chinhu chakadai seMitambo yeOlympic asi asi VaIjipita vaikwikwidza munzvimbo dzakavanzika uye vaizviitira kungofara. Pakanga pasina kana vateereri.
Nekudaro, nenzira yekusarudzika, kwaive nemutambo waiitwa nemaharahara uye kuti neimwe nzira yaigona kuve nechekuita nemutambo wechiitiko. Mutambo uyu wakaitwa apo madzimambo anga achitonga kwemakumi matatu emakore, saka yaive mhemberero isingawanzoitika nekuda kwekutarisirwa kwehupenyu hwevanhu panguva iyoyo.
Chii chaive mutambo waFarao?
Mune ino mhemberero-yekucherechedza makore makumi matatu ekutonga kwaharahara, mambo aifanira kufamba akapotera munzvimbo yerudzi rwemujaho chinangwa chake chaive chekuratidza vanhu vake kuti aive achiri mudiki uye aine simba rakaringana rekutonga nyika.
Mutambo wekutanga werudzi rwawo waipembererwa mushure memakore makumi matatu ekutonga uye makore matatu ega ega zvichizotevera. Semuenzaniso, zvinonzi farao Ramses II akafa nemakore anopfuura makumi mapfumbamwe, saka angadai akave nenguva yakawanda yekuita mhemberero dzakasiyana siyana, achive anosarudzika mukati menguva.
Paive paine pharao aimira kunze semumhanyi?
Farao Ramses II akararama-kwenguva refu uye akapinda mumitambo yakati-yechirangaridzo asi zvaive zvakadaro Amenhotep II uyo aifungidzirwa semuenzaniso wemamambo monarch, kubva pakuona kana kwekuona.
Rutivii rwakaitwa nerwizi naNile pamitambo muEjipitori?
Rwizi rweNile ndiyo yaive mugwagwa mukuru munyika panguva iyoyo, waipfuura nayo zvinhu uye vanhu vaifamba. Kune izvi, kukwasva uye kufamba zvikepe zvaishandiswa, saka maIjipita aive akanaka pachirango ichi.
Ndokusaka murwizi rwaNire vaigona kuronga makwikwi ega ega, kungave nechikepe kana kushambira, asi aisave makwikwi neruzhinji kwaihwina mubairo.
Nezve hove, zvinyorwa zvinochengetwa zvinoratidza izvo MuNire maivewo nemimwe makwikwi eakavanzika kuona kuti ndiani aigona kubata zvakanyanya..
Paive nemwari here ane chekuita nemitambo mungano dzevaEgipita?
MuEjipitori yekare maive nevamwari veinenge nzvimbo dzese dzehupenyu asi zvisinganzwisisike kwete zvemitambo nekuti, sekutaura kwandamboita, panguva iyoyo mutambo waive usati wabatwa sezvatinoita nhasi.
Nekudaro, maIjipita kana vainamata vamwari muchimiro chemhuka nekuda kwehunhu hwavakakumikidzwa. Ndokunge, vanamwari vane muviri weshiri vaiyemurwa nekukasira kwavo uye kugona kubhururuka, nepo ivo mwari vaive nechimiro chehando vaiitwa nesimba rezvisikwa izvi, sezvinoitika kune dzimwe mhuka dzakaita seye makarwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Mitambo nemitambo muIjipita yekare
Tora kunyura mudziva repingi, Lake Hillier
Nhoroondo yeMatyoshka, chidhori cheRussia